IMongoDB 5.0 iza nedatha ngendlela yochungechunge lwesikhathi, izinguquko ezinombolweni nokuningi | Kusuka kuLinux
Uhlobo olusha lwe IMongoDB 5.0 isivele ikhishiwe nakule nguqulo entsha kunezelwa ezinye izindaba ezithokozisayo esingagcizelela kuyo ukuqoqwa kwedatha ngendlela yochungechunge lwesikhathi, kanye nokusekelwa kolawulo lwenguqulo ye-API, ukusekelwa kwendlela ebukhoma ye-Live Resharding, phakathi kokunye.
Kulabo abangajwayele iMongoDB, kufanele ukwazi lokho le DB isekela ukugcina amadokhumenti ngefomethi efana ne-JSON, inolimi oluguquguqukayo lokukhiqiza imibuzo, ingadala izinkomba zezimpawu ezahlukahlukene ezigciniwe, inikeze ngempumelelo ukugcinwa kwezinto ezinkulu kanambambili, isekele ukusebenza kwerejista ukushintsha nokufaka idatha ku-database, ingasebenza ngokuya ngemephu / yehlise ipharadesi, isekela ukuphindaphindeka nokwakha ukucubungula okubekezelela amaphutha.
Izici ezintsha eziyinhloko zeMongoDB 5.0
Kule nguqulo entsha singakuthola lokho uhlelo lokubala izinombolo lushintshiwe futhi idluliselwe kushejuli yokuqagela engaqagelwa. Kanye ngonyaka, kuzokwakhiwa uhlobo olubalulekile (5.0, 6.0, 7.0), kanye njalo ezinyangeni ezintathu, izinguqulo zesikhashana ezinezici ezintsha (5.1, 5.2, 5.3) futhi, lapho kudingeka, izibuyekezo zokulungisa ngeziphazamisi nokulungiswa kokungcupheka (5.1. 1, 5.1.2, 5.1.3 .XNUMX) .
Izinhlobo zesikhashana zizokwakha ukusebenza kokukhishwa okukhulu okulandelayo, okungukuthi, iMongoDB 5.1, 5.2, ne-5.3 izokwengeza izici ezintsha zokukhishwa kweMongoDB 6.0.
Mayelana nezinto ezintsha ezivezwe kule nguqulo entsha ye IMongoDB 5.0 Singathola ukuthi ngiyazi kungezwe ukusekelwa kolawulo lwenguqulo ye-API, ekuvumela ukuthi ubophele uhlelo lokusebenza kwisimo esithile se-API futhi uqede ubungozi obuhambisana nokwephulwa kokuhambisana okubuyela emuva lapho uthuthela kuzinguqulo ezintsha ze-DBMS. Ukulawulwa kwenguqulo ye-API kwehlukanisa umjikelezo wempilo yohlelo lokusebenza kumjikelezo wempilo wedathabheyisi futhi inika amandla onjiniyela ukwenza izinguquko zohlelo lokusebenza lapho kuphakama isidingo sokusebenzisa amakhono amasha, kunokuba kube lapho ushintshela enguqulweni entsha ye-database.
Okunye okusha okubalulekile yilezi ukuqoqwa kwedatha ngendlela yochungechunge lwesikhathi esevele enzelwe ukugcina izingxenye zamanani wepharamitha aqoshwe ngezikhathi ezithile (isikhathi nesethi yamanani ahambisana nalesi sikhathi). UMongoDB uphatha la maqoqo njengemibono engenziwanga futhi erekhodwayo kudalwe kusuka kumaqoqo angaphakathi futhi kuqoqe ngokuzenzakalela idatha yochungechunge lwesikhathi kufomethi yesitoreji esithuthukisiwe lapho ifakwa.
Kuyaziwa futhi ukuthi ingeziwe ukusekelwa kwendlela yokubukhoma ebukhoma, okukuvumela ukuthi ushintshe okhiye be-sharding abasetshenziselwa sharding on the fly ngaphandle kokumisa i-DBMS.
Kanye ne ukusekelwa kwemisebenzi yokuhlaziya ekuvumela ukuthi wenze izenzo ngesethi ethile yamadokhumenti eqoqweni. Ngokungafani nemisebenzi ehlanganisiwe, imisebenzi yefasitela ayiwele kusethi eyiqembu, kepha kunalokho okuhlanganisiwe kususelwa kokuqukethwe "kwewindi" okufaka idokhumenti eyodwa noma amaningi kusethi yomphumela.
Futhi, Amandla wokubethela wensimu anwetshiwe ohlangothini lweklayentinjengoba manje usungakwazi ukuhlela kabusha izihlungi zokucwaningwa kwamabhuku ze-x509 nokujikeleza kwesitifiketi ngaphandle kokumisa i-DBMS. Kungezwe ukusekelwa kokulungiselela i-cipher suite ye-TLS 1.3.
Igobolondo leMongoDB ikuvumela ukuthi uxhume ku-DBMS, ushintshe ukucushwa futhi uthumele imibuzo. Isekela ukuqedela okuzenzakalelayo kwe-MQL expression, command and method input, ukugqamisa kwe-syntax, izinkomba zomongo, imiyalezo yokuhambisa iphutha, kanye nokukwazi ukwandisa ukusebenza ngama-plugins
Kwezinye izinguquko kwethulwe:
Thola, bala, uhluke, uhlanganise, imephuUnciphise, uhluLokuqoqiwe, kanye nohlu lwama-Index akusavinjelwa uma umsebenzi usebenza ngasikhathi sinye njengoba uthola ukukhiya okukhethekile kuqoqo lwamadokhumenti.
Njengengxenye yomzamo wokususa amatemu angalungile kwezepolitiki, umyalo we-isMaster kanye nendlela ye-db.isMaster () iqanjwe kabusha ngokuthi sawubona nethi db.hello ().
I "mongo" CLI endala yehlisiwe futhi izosuswa ekukhishweni okuzayo.
Ekugcineni, uma unentshisekelo yokwazi okwengeziwe ngakho, ungaxhumana ne- imininingwane kusixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » IMongoDB 5.0 iza nedatha ngendlela yochungechunge lwesikhathi, ukushintsha izinombolo nokuningi